कमिसनको लोभमा धमाधम ठेक्का दिँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरण, प्राधिकरणकै कर्मचारीको यस्तो आरोप::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
कमिसनको लोभमा धमाधम ठेक्का दिँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरण, प्राधिकरणकै कर्मचारीको यस्तो आरोप
भूकम्प पीडितका घर बनाउन र भासिएका बस्ती स्थानान्तरणमा खासै चासो नदिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारी भवन निर्माणको काममा भने हचुवाका भरमा ठेक्का दिएको छ।
कमिसनको लोभले ठेक्कामार्फत गरिने पुनर्निर्माणको काममा आवश्यकताभन्दा बढी हतार गरिएको प्राधिकरणकै कर्मचारीको आरोप छ। भूकम्पपछिका ३३ महिनामा करिब १२ प्रतिशत मात्रै नयाँ घर बनेका छन्। अझै ६ लाख ७२ हजार ७ सय ३४ घर निर्माण हुन बाँकी छन्।
सबै बस्तीमा समयमै प्राविधिक नपठाउने, खटिएका प्राविधिकले पनि सहयोग गर्नेभन्दा प्राविधिक कुरामा जोड दिएर झन्झटिलो बनाउने गरेकाले पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएको कर्मचारीको आरोप छ। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका सदस्यहरूले पनि समितिको ९६औँ बैठकमा नेतृत्वलाई लिखितरूपमै त्यस्तै आरोप लगाएका थिए।
मापदण्डका नाममा अनावश्यक दुःख दिएको भूकम्प पीडितले पनि गुनासो गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणका केही कर्मचारी निर्णायक तहले कमिसन आउने काममा मात्र ध्यान दिएको आरोप लगाउँछन्।
भूकम्पमा क्षति पुगेको सिंहदरबारको मूल भवनलाई मर्मतसम्भार गर्ने कि भत्काउने भन्ने अध्ययनका लागि कन्सल्ट्यान्ट छनोट गरिँदैछ। तर, प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने कम्पनीको टुंगो नलाग्दै स्क्याफोल्डिङको ठेक्का दियो। सो कम्पनीले सिंहदरबारको मूल भवनमा रेट्रोफिटिङका लागि भनेर ६ महिनाअघि नै फलामका डन्डी ठड्याइसकेको छ।
स्क्याफोल्डिङका लागि ठेक्का दिने हतारप्रति प्राधिकरणका कर्मचारी नै शंका जनाउँछन्। कर्मचारी स्रोतका अनुसार यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलको जोडमा ठेक्का लगाइएको थियो। सिंहदरबारमा गरिएको स्क्याफोल्डिङमा मात्रै होइन, अन्य भवनको पनि ठेक्कापट्टामा हतार गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
ओली मातहतका विभागहरू यति निकम्मा ! बाबुराम, भीम रावल र कमल थापाले गरे कडा माग
पदीय भागबण्डा विवादमा डुब्यो नेकपा, गुटले ‘तिम्रोे–मेरो’ भएपछि खैलाबैला
ओलीका यी खास मान्छेले देखाए टेलिभिजनमा असली रुप !
सभापति देउवाको भविष्यवाणी पुष्टि हुँदै, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार ऊर्जा मन्त्रालयमा राखिए
वाइडबडीपछि मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको अर्काे कर्तुत, भारतसँग लफडा !